Enwere m ike ị nweta ego m, Wikipedia? | Martech Zone
Adịghị m nnukwu onye ntinye aka Wikipedia. Agbanyeghị, n'oge gara aga enyerela m ụfọdụ ego ntọala ma nyefee ọdịnaya na saịtị ha. M hụrụ Wikipedia n'anya… M na-eji ya oge niile na m na-ekwukarị ya mgbe ọ bụla na blọọgụ m. Wikipedia nyeere m aka - na - ewepụta ụfọdụ ebe maka saịtị m NA Wikipedia mere ka saịtị m gbasaa site na njikọ m.
N'inye echiche a, nke a ọ bụbeghị inye ma were ọnọdụ? Enyela m Wikipedia ego na ọdịnaya. Na nloghachi, ha enyela m ọkwa njin nchọta ha dị mma ma na-akụzi ihe.
ugbu a Wikipedia is agbakwunye nofollow niile njikọ na mpụga. Nke ahụ na-akụkarị onye na-ezo aka na blọọgụ m, yabụ na enweghị m ntụkwasị obi m ga - atụfu ntinye igwe ọchụchọ maka mkpebi ahụ.
Echere m na ọ gaghị enye m nsogbu ma ewezuga na anyị abụọ eritela uru na mmekọrịta azụmahịa anyị n'oge gara aga. Wikipedia naanị na ọ nwere ọmarịcha njikwa ọchụchọ ya maka:
Ndị mmadụ nyere ọdịnaya
Ndị mmadụ jikọtara na ọdịnaya ahụ
Yabụ, lee ajụjụ $ 10. Anyị niile enwere ike ị nweta ego anyị, Wikipedia? Changed gbanwere mmekọrịta azụmahịa na ndị nyere gị niile na-enweghị ịjụ ha mbụ. Ma eleghị anya, ị gaghị aba ya, ọzọ.
Nye ndị na-agụ akwụkwọ m post ụbọchị ole na ole gara aga, ị ga-enwe obi ụtọ ịmara na CAN Pụrụ imezi ọkwa gị site na ịza ajụjụ na njikọ gị na weebụsaịtị gị. Enwere m nkwarụ nofollow na blọgụ m. Ya mere kwuo okwu! Nye ụfọdụ ọdịnaya buru ibu ma rite uru!
Tags: nofollownofollow njikọrel = nofollowwikipedia
M mebiri WordPress 2.1
Ị hụrụ Mgbasa ozi Andy Beal iji mee ka ndị mmadụ "nofollow" njikọ ha na Wikipedia? O yiri ka ọ dị mma.
Aghọtaghị m mgbagha dị na mgbagharị ọhụrụ a nke Wikipedia. Isi okwu nke njikọ ndị dị na ibe Wikipedia bụ ịkọwa saịtị ndị isiokwu ahụ na-eweta ọdịnaya ha site na. Ọ bụrụ na saịtị ndị akpọrọ aha enweghị ntụkwasị obi zuru oke iji nwee njikọ nkịtị, gịnị kpatara ha ga-eji tụkwasị obi dị ka ntụnye aka maka edemede? Enwere m ike ịghọta ịgbakwunye "nofollow" na njikọ ọhụrụ ruo mgbe ha ga-enyocha ụfọdụ nyocha, mana ịgbakwunye ya na-adịgide adịgide na njikọ niile na-apụ apụ dịka ọ dị njọ.
Ọbụna enwere m otu ihe ahụ! wikipedia wutere anyị!
Okwu a dum na-adọrọ mmasị. Site na ịghara inwe mkpado nofollow ị na - akwalite ịza ajụjụ, mana na - akwalite adịgboroja (ma mee ka spam na-esiwanye ike). Achọpụtala m Akismet dị irè nke na ekwenyere m na ihe ị na-eme n'agbanyeghị…
Banyere Wikipedia- naanị igwu onye na-akwado ekwensu- Amaghị m na onye ọ bụla na-ahụ ya dị ka mmekọrịta / nye mmekọrịta, n'echiche ego. Eeh, mgbanwe ozi, mana inwetara site na oru efu dika nke a na-eme ka obodo ghara inwe nsogbu. Ọ bụrụ na ị na-agbakwunye ọdịnaya dị mma na njikọ dị mkpa, ọ kwesịrị ịdị mma, mana ole ndị spammers nọ na-egbochi Wikipedia na-agbakwunye akara mkpirisi ndị ahụ? Na mgbakwunye, ego ị nyere na-abụkarị iji kwado saịtị ahụ ị na-eji maka ozi, ọ bụghị nke ịghaghachi; )
Na-eweta ezigbo isi, mana amaghị m ihe ọnụ ọgụgụ ahụ dị n'etiti ndị na-enye onyinye na ndị nwe ebe nrụọrụ weebụ nwere njikọ na wikipedia. M ga-eche na ọ dị ala, mana ọ ka bụ ihe dị mma, mana ọ bụghị nke ha ga-elekọta - ebe ọ bụ na isi okwu mkpebi ọhụrụ a bụ ịchụpụ nkwalite onwe onye (echere m na ị gbakwunyere njikọ nke gị wikipedia?)
I nyere onyinye na otu na-abụghị maka uru, ị kwụghị ụgwọ maka ọrụ.
Ajụjụ bụ n'ezie ihe ị nyere na Wikipedia maka? Ọ bụ iji nye backlinks na blọọgụ gị ka ọ bụ ka ọ nyere aka wulite encyclopedia? Ọ bụrụ na ị ga-arụ ụka ka eweghachite onyinye gị, Wikipedia nwere ike ịrụ ụka nke abụọ. Ha anọghị n'okpuru ọrụ ọ bụla iji nyere gị aka nyocha ogo ogo gị, ọ bụ ezie na ọ bụ ezigbo ego.
Ọ bụ ihe ihere na mmegbu nke sistemụ emeela ka a ghara itinye ya n'ọrụ, mana ọ naghị adọpụ ebumnuche Wikipedia ma ọlị.
Nke mbu, daalụ maka iwepụ nofollow na blọgụ gị. Emeela m otu ihe ahụ na nke m.
Site na ịgbakwunye nofollow na Wikipedia, ha anaghị edozi nsogbu kama ọ bụ naanị ihe mgbaàmà ahụ.
Ọ bụ Tamar Weinberg
Jenụwarị 26, 2007 na 1:01 PM
Raise na-ewelite ajụjụ na-adọrọ mmasị. M na-eche ma ọ bụrụ na Wikipedia jiri ụma họrọ imejuputa ọrụ a mgbe ha nwetara onyinye. Echere m na ha nara ego were ọsọ.
Manoel Netto kwuru
Feb 2, 2007 na 2:08 PM
Payback na wikipedia.
More Ahịa More Sales
Mee 27, 2007 na 4: 31 PM
Enwere m mmetụta na njikọ nofollow ga - emesị (ha nwere ike ịmeworị) nyere aka na ogo nchọta ọchụchọ gị.
Cheedị echiche banyere njikọ njikọ ọhụụ bụ: Ọ bụ njikọ a na-achọghị iche, na-enweghị atụ na nke PR na anyaukwu na Net. Kedu njin ọchụchọ ha nwere uche ziri ezi ga-eleghara ozi ndị a agbakwunyere na weebụsaịtị mkpa.
Ekwenyesiri m ike na Google nwere ọkwa nofollow nke web ages
Mee 29, 2007 na 11: 09 AM
Agwara m na Wikipedia tinyekwara ntinye ntinye na njikọ njikọ azịza
Nginggbanwe ịgbaso usoro na-eduhie eduhie maka wiki iji were ma hụ na ha tara ahụhụ na usoro nke okike ọdịnaya. N'aka nke ọzọ ọ bụghị ihe ọjọọ niile, ị ka nwere ike ịnweta okporo ụzọ site na njikọ gị.
M mụtara n'ime egwuregwu blọọgụ n'oge na-adịbeghị anya, mgbe wikipedia etinyeworị ihe na-enweghị isi, yabụ m tụfuru ụgbọ ahụ. Aghaghị m ikwu na, na ejikọtara m na otu edemede na blọọgụ m site na wikipedia na peeji nke ọ ka bụ nnukwu onye na-eweta ahịa.
Feb 3, 2008 n’elekere 4:11 nke abali
Ọ D I M na m na-anwa ime ihe ndị a / enweghị usoro echiche, ma ugbu a enwetara m ya! Are na-ekwu na ị nyefere Wiki na otu ihe njikọ gị na ya, google agaghị eso ya, mana ụmụ mmadụ ga-eme ya? Na ndu aru, nke ahu bu ihe ezi uche di na ya, na ayi choro ka umu mmadu gho anyi uru! Ha na - abara igwe mmadu uru, ma bulie uru mmadu bara!
Gaurav Kumar kwuru
Y’oburu na gi na nkwekorita na wikipedia gi gha agha inweta ego gi.